WDUV200-XXX Warshadaha daabacaadda hal-baas oo duuban oo la rogo warshadda hore ee dhijitaalka ah - Shiinaha WDUV200-XXX warshadda hal-baas oo duuban oo duubi karta soo-saareyaasha daabacaadaha ka horreeya, alaab-qeybiyeyaasha
WD250-8A + Jiingado la cusboonaysiiyay
WD250-12A+ kartoono jiingado leh...
WD200-XXX+ hal warshad...
WDUV200-XXX warshad hal...
WDUV200-XXX Mashiinka daabacaadda dhijitaalka ah ee xawaaraha sare leh ee hal baas ah oo leh sawir midab leh oo UV ah
Saxan la'aan, nadiifin la'aan, kombuyuutar caqli-gal ah, habka fudud, badbaadinta alaabta macmalka ah;Nidaamka iftiinka LED-ka ee gaarka ah, si dhakhso ah u daawaynaya qalalan, wax badan hagaajinta saamaynta daabacaadda;
Isticmaal afar midab oo CMYK ah qaab daabacaadda, waxaa lagu dalban karaa shan midab CMYK + W, ka dhigaya daabacaadda midabo badan, ilaali daabacaadda midabka leh iyo hawlgalka dhijitaalka ah ee ku habboon, dhanka kale, ka gaadh isku-dhafka ugu fiican ee tayada sare leh iyo xawaaraha sare.
WDUV00-XXX wershadaha hal-baas oo duuduub ah si loogu duubo daabacaha hore ee dhijitaalka ah ee warqadda jiingadaha ah
WDR200 isticmaal khad biyaha ku salaysan, CMYK afar midab;
WDUV200 waxay isticmaashaa khad UV, waxay dooran kartaa CMYK + W shan midab;
Saxnimada ku saleysan 600 xariiq, xawaaraha daabacaadda ugu badnaan wuxuu noqon karaa 108 m/min;
Ikhtiyaarka ah waa 900/1200 khadadka kuwaas oo kara ilaa 210 m/min;
Baaxadda daabacaadda 1600mm ~ 2200mm waa la dalban karaa;
Ku xidhan nidaamka qalajinta xirfadlayaasha ah, nidaamka daahan varnish iyo duub si ay u duubaan nidaamka ururinta auto;
Tayada daabacaaddu waxay ka sarraysaa daabacaadda flexo, oo la barbar dhigi karta daabacaadda kabka.
WDUV200-XXX duuduuban hal baas oo warshadaha ah si loo duubo daabacaha hore ee dhijitaalka ah ee warqadda jiingadaha ah
●WD200 isticmaal khad biyaha ku salaysan, CMYK afar midab;
●WDUV200 isticmaal khad UV, waxay dooran kartaa CMYK+W shan midab;
● Saxnimada ku saleysan 600 xariiq, xawaaraha daabacaadda ugu badnaan wuxuu noqon karaa 108 m/min;
●Ikhtiyaarka ah waa 900/1200 xariiq oo awood u leh ilaa 210 m/daqiiqo;
●Balacda daabacaadda 1600mm ~ 2200mm waa la dalban karaa;
●Ku xidhan nidaamka qalajinta xirfadlayaasha ah, nidaamka daahan varnish iyo duub si ay u duubaan nidaamka ururinta auto;
●Tayada daabacaaddu waxay ka sarraysaa daabacaadda flexo, oo la barbar dhigi karta daabacaadda ka-baxsan.